Serbia : Fisaintsainana momba ny fisalasalàna sy ny finoana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Aogositra 2020 8:52 GMT
Ny Alahady 19 Aprily 2009 dia nankalaza ny Paska ireo mpino ôrtôdôksa. Tamin'io fotoana io dia nisy Serba bilaogera vitsivitsy naneho ny fandinihany ireo angano sy fotopinoana isankarazany mifamatotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
Ho an'ny filôzôfia sy ny siansa dia tokony hametrahana fisalasalàna daholo ny zavatra rehetra (dubitandum de omnibus). Heloka goavana eo anatrehan'ny fiangonana ny maneho fisalasalàna momba ny fitsangana-ko velon'i Jesosy. Noho ny fisian'ny fisalasalàna tahaka izany, betsaka ny olona maty nampijaliana sy nodorana teny ambony kitay nandritra ny ‘inquisition‘. Saingy tany am-piandohana, ireo mpanaradia an'i Jesosy, indrindra fa ny iray tamin-dry zareo, Tomasy, dia nànana ihany koa fisalasalàna momba ny fitsanganan-ko velona. Vokany, tsy tokony ho heloka mihitsy ny fisalasalàna. Raha manana fisalasalàna aho, dia misaina aho izany. Raha misaina aho, dia misy aho izay (cogito, ergo sum). Isaky ny andro Paska, manontany tena aho ny amin'izay tsara indrindra – ny mino ve sa ny misalasala – ary raha toa ka mba afaka misafidy ihany ny olombelona ?